A Workout izay maharitra — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nandritra ny fiainako, Lasa aho amin'ny alalan'ny fizaran-taona rehefa Efa tena nandrisika miasa avy. Fony aho tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fotsiny aho te-ho Buff ampy hampiaiky volana ny zazavavy (I nahomby). Tamin'ny volana eo anoloan 'ny fampakaram-bady aho, niezaka ny hiasa eo an-tanako honeymoon tora-pasika tena. Tato ho ato, Fotsiny aho miezaka mba ho azo antoka ny ho velona lasa ny faharoapolo taonany. Ny antony efa niova nandritra ny taona maro, fa izay tsy niova no mora niova hevitra ireo antony ireo.
Angamba ianao noho ny antony voajanahary hiasa an-Manaova feo fifaliana avy ny namako izay mamoaka pics sy lahatsary ny fampiofanana regimen isan'andro. Fa raha toa ahy ianao, ny antony manosika miakatra sy midina toy ny zanak'osy amin'ny trampoline. Ahoana raha ny vokatry ny asanao avy naharitra mandrakizay, anefa? Ve ianao hazoto kokoa?
Asa mafy Pays Off
Nandritra ny Lalao Olaimpikan'ny Ririnina tamin'ny volana lasa aho dia talanjona toy ny helatra nijery haingana sy highflying bobsledders snowboarders. Gaga aho araka ny fanatanjahan-tena tsara indrindra, fa mainka aho gaga rehefa nieritreritra mikasika ny famaizana fiofanana tsy maintsy efa mba ahatongavana any.
Rehefa tapitra ny zava-nitranga tsirairay rehefa nandresy atleta nitsangana teo amin'ny mpandresy ny podiums, miaraka amin'ny tsiky eo amin'ny endrika sy ny medaly sasatra teo amin'ny tratrany izy ireo, dia nijinja ny soa ny fampiofanana. Fa araka ny Baiboly, misy ambony karazana fiofanana-tsy noho ny fiofanana ara-batana dia zava-poana, fa noho izany voafetra.
Raha efa nanontany tena izay mieritreritra momba ny workouts, Ity ny valiny: Izy mihevitra fa manana mahasoa, fa voafetra, sarobidy. Noho izany raha mihazakazaka ianao, manao drills, sy nankahery ny lanja, fitsaharana amin'ny fahalalana fa misy zavatra tsara tokony hatao. Fitandremana ny vatanao amin'ny endrika tsara Mendri-piderana-na dia hendry, fa izany ihany no mahazo anao handeha lavitra.
Izao no lazain'i hoy Paoly Apôstôly ho an'i Timoty:
"Fa tsy misy ifandraisany amin'ny tsy manaja sy adaladala angano. kosa, hampiofana ny tenanao amin'ny toetra araka an'Andriamanitra, fa ny fanofanana ny vatana dia manana tombontsoa voafetra, fa ny toe-panahy araka izay mahasoa amin'ny zavatra rehetra, satria izy io no misy fampanantenana ny amin'ny fiainana ankehitriny, ary koa ho amin'ny fiainana ho avy." (1 Timothy 4:7-8)
Afaka mamintina ny hevitry Paoly amin'ny asa toy izao: Fiofanana ara-batana tsara, fa fampiofanana ara-panahy tsara kokoa. Ary izany satria heriny ara-batana maharitra, raha mbola toetra araka an'Andriamanitra mandrakizay. Paoly Miresaka momba "ny toe-panahy araka fanofanana" Mihevitra aho fa izy dia midika hoe manao ny zavatra izay ara-panahy ho matanjaka ianao. Izany dia midika hoe manao ny asa izay hahatonga anao bebe kokoa an'Andriamanitra. Angamba manainga ny Baiboly, na dia tsy tsara noho ny manainga ny lanjany, nefa tsy miraharaha izany dia midika hoe isika hanadino avy amin'ny noho ny tsara ianao fahasalamana.
Mandrakizay dia tsara noho ny fotoana fohy
Isika rehetra dia mahafantatra fa rehefa misy zavatra maharitra izany intsony tsara kokoa. Tsy misy olona mividy fiara Ho fantany izany harodany ny volana manaraka. Te hividy isika fa zavatra izay maharitra elaela, satria Ho hahazo bebe kokoa avy amin'ny fampiasam-bola. Fa raha izahay amin'ny fanapahan-kevitra izany kajy momba ny fiara, mainka kajy isika no tokony momba ny fanahintsika?
Impiry ianao no hieritreritra momba ny mandrakizainao? Ny marina dia, dia tokony hieritreritra momba azy io mihoatra noho isika. Tsy misy fanontaniana fa isika rehetra dia hiaina mandrakizay; ny fanontaniana dia hoe inona izany mandrakizay dia ho tahaka. Noho izany tokony hanao fampiasam-bola izao, satria fantatrareo fa ny vokany dia tsy farany.
Izany no tokony hisy fiantraikany izay zavatra mifantoka amin'ny isan'andro isan'andro. Fanatanjahan-tena tsara, fa tsy ry zareo ny zava-drehetra. Ny hery ara-batana mba mankanesa any an oniversite, nefa dia tsy mahazo anareo ho any an-danitra. Tokony handray tsara fikarakarana ny vatana, fa manana zavatra mavesatra mba hikarakara. Inona no salama dia ny fanahinao?
Ahoana no mba hampiofanana
Andriamanitra dia manome fahafahana antsika mba hanangana "hozatra ara-panahy", rehefa avelantsika handeha ny fahotana sy haka ny mihazona an'i Jesosy. Ary avy eo dia nandefa antsika ho any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Izy no nanome antsika ny fahasoavany ny teniny, ny vahoakany, ary na dia ny sofiny. Aoka àry ny mamaky, fiombonana, ary mivavaha. Atleta hampiofanana mafy, satria te-ho vonona ho amin'ny lalao na lalao mialoha ny azy ireo. Te-ho afaka hifaninana amin'ny avo lenta.
Isika rehetra dia hiatrika fitsapana ara-panahy, fitsapana, ary ny ady isan'andro. Vonona ve ianao? Coasting tsy miasa ho an'ny atleta ary izany dia tsy mety ho an'ny Kristianina. Tamin'ny taona lasa ny famakiana Baiboly dia tsy ampy ny hanohana anao amin'ity taona ity. Ho afa-tsy isika-tsara ny hazakazaka lavitra ezaka izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa manomana antsika ho amin'ny hazakazaka ara-panahy amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena.
Tena manampy ahy ny mahatsiaro fa raha mbola ny soa azo avy amin'ny fiofanana ara-batana dia voafetra, ny soa ara-panahy tsy manam-petra fampiofanana. Tamin'ny andro izany, raha tsy mahatsiaro ho toy ny mivavaka na mamaky ny Tenin'Andriamanitra, Afaka mampahatsiahy ny tenako fa tsy ny soa kely na mihelina. Dia tsy hanampy ahy amin'ny herinandro ambony, hanampy ahy eo amin'ny fiainana manaraka. Izay ihany ny antony manosika Mila.
Theodora • March 11, 2014 amin'ny 10:40 aho • navalin'i
Ity Tena nitahy ahy…!!!Misaotra anao!!& Hotahian'andriamanitra anie ianao….misaotra anao noho ny mamela an'i Jehovah hampiasa anao.
Matt Smethurst • March 11, 2014 amin'ny 10:42 aho • navalin'i
Misaotra noho izany teny tsara, Trip.
Daniel DryIce Reyes • March 11, 2014 amin'ny 10:44 aho • navalin'i
Trip Misaotra anao noho izany. Nandritra ny herinandro no matahotra aho ny fahafatesana. Tsy fantatro ny antony fa ataoko. Tena nila nampahatsiahy fa ho any an-danitra no zavatra tsara indrindra mandrakizay eto an-tany ity dia tsy hahazo na inona na inona aho.
vizlyf ny • March 11, 2014 amin'ny 10:47 aho • navalin'i
Izany no awesome! Thanks fam! Ianao biby!
GregBrown • March 11, 2014 amin'ny 11:06 aho • navalin'i
Misaotra noho izany kely fampaherezana! Mora ho an'ny sasany amintsika hifantoka be loatra amin'ny fihinanana salama sy maneho. Ve anefa handany fotoana bebe kokoa manomana ny sakafo sy ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny, noho ny amin'ny fotoam-vavaka sy ny fianarana ny Teny? Mora ny manana ny laharam-pahamehana misavorovoro ny, na dia eo amin'ny sahan'ny misiona.
Fitahiana ao amin'i Kristy ny rehetra!
Matt • March 11, 2014 amin'ny 1:18 PM • navalin'i
manaiky aho. Ny ara-panahy fitness / fampiasana zava-dehibe lavitra kokoa noho ny ara-batana fitness / fanatanjahan-tena, fa mino koa aho fa azo atao na tamin'izany andro izany ihany koa. I fantatrareo fa misy tsipika tsara eo miasa ho an'ny tenanao sy ho an'ny an'Andriamanitra miasa, fa misy fahasamihafana (mino izany na tsia). Andriamanitra miasa ho an'ny, ara-batana, ahitana ny singa ara-panahy. Ohatra, rehefa manana workout mpiara-miasa, roa lahateny ianao matetika rehefa miara-workout. sary an-tsaina raha, rehefa roa lahateny, dia tsy momba ny paompy, ny hozatra, sns. Tsy, rehefa miresaka, miteny ao am-ponao, ary manana firaisana ao amin'i Kristy hafa. Ny asa ara-batana dia mety ho avy iraisana ho an 'ireo liana amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, fa raha manampy ny lafiny ara-panahy, mendrika ny handeha any amin'ny iray amin'ny ambaratonga unearthly (marina izay dia tokony ho), fanelezana ny fitiavan'i Kristy. Kolosiana 3:17
Casey • March 11, 2014 amin'ny 1:34 PM • navalin'i
Izany dia nahatalanjona ahy ny fomba ny Tompo miteny amin'ny fomba maro samy hafa. Aho niady tamin'ny eritreritra ny “Tokony hiasa androany” saingy tsy hahatsapa ho toy ny amin'izao aho faritra hatrany hatrany ary somary nahatsapa azo very maina ny fotoana raha tsy zavatra mitohy eo amin'ny fiainako. Mamaky ity bilaogy ity dia fampahatsiahivana avy amin'Andriamanitra fa Izy>Izaho sy rehefa mifantoka amin'ny ara-panahy sy hampiofana azy, Tsapako natao tsara, ary matoky fa tsy very maina ny fotoana. I mieritreritra mijanona ara-pahasalamana dia zava-dehibe, fa fantatro fa mandalina ny teniny sy ny fitadiavana azy tsara rehetra faharoa mendrika ny fiainana. Fotoana miaraka amin'Andriamanitra dia rava na oviana na oviana. Misaotra noho ny fankatoavana ny zavatra Kristy no niantso anareo mba hizara. I nila izany. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao Trip!
Trip Lee • March 11, 2014 amin'ny 4:28 PM • navalin'i
tanteraka, tokana isaky ny faharoa, izay mendrika izany. Faly afaka hamporisihina!
JB • March 11, 2014 amin'ny 2:00 PM • navalin'i
Tsara zavatra Bro
TOMPO • March 11, 2014 amin'ny 3:18 PM • navalin'i
Hey diany, ummm thats lalina mandrisika byitself
Dera • March 11, 2014 amin'ny 3:43 PM • navalin'i
Ny olona izany zavatra mahatahotra, Tiako izay hijoro amin 'ny. Tiako ny mianatra avy amin'ny fampianarana ao amin'ny mozika ary ankehitriny ny boky “The Good Life”.
Trip Lee • March 11, 2014 amin'ny 4:26 PM • navalin'i
Faly afaka hamporisihina. Ary manantena aho fa ny boky dia afaka hanampy ho anao amin'ny fomba maro!
MrsRondo • March 11, 2014 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
Izany no awesome. Ireo zavatra roa manantena aho ka hahazo sy hihazona amin'ity taona ity, ary mbola miady mafy aho ny izy no zava-dehibe lavitra kokoa noho ny hafa. Thanks Trip, ara-potoana ny blaogy no tena nanentana ny fanahy, ary manondro foana mody indray aho mba Superstar.
Tee-boy • March 11, 2014 amin'ny 5:16 PM • navalin'i
Rahalahy izao no nilaiko. Miady mafy foana aho ary miady ny Fanahy nandritra ny roa andro. Vao nanadino nivavaka, mamaky ny Malagasy, ary na dia mandeha any am-piangonana. Izany dia antso fanairana. Ary amin'izao sisa izao niova aho anankiray ao amin'i Kristy. Nieritreritra mihitsy aza aho Andriamanitra N mihaino intsony aho noho ny amin'ny ratsy fanahy ny fiainana. Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana ho ahy ary fantatro aho handray foana eo anatrehany, ary dia marina sy mahatoky Izy ka mamela ahy ny fahotako.
Rahalahy Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fiainana sy ny asa lehibe izy dia ny manao alalanao. Andriamanitra anie hitahy anareo noho ny manaiky ny asany.
Mijanona nitahy ny rahalahiko.
Keinya • March 11, 2014 amin'ny 5:31 PM • navalin'i
Hazavao tsara naka! Misaotra anao! = O)
RobJohnson • March 11, 2014 amin'ny 5:47 PM • navalin'i
nitso-drano ary atosiky ny izany. Thanks Trip!
Liam • March 12, 2014 amin'ny 12:00 aho • navalin'i
Trip ny lahatsoratra tonga foana ny tonga lafatra aho amin'ny fotoana. Ataovy famelana Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny namako ianao
Joshua Galvin • March 12, 2014 amin'ny 2:18 aho • navalin'i
Tena nila izany Bro. Misaotra ny fampaherezana.
Mistry • March 12, 2014 amin'ny 3:28 aho • navalin'i
deeeeep struff Trip, tsy zavatra izay matetika miresaka momba ny. Mba miangavy re, foana ny avy Lahatsoratra.
Vicmonyi • March 12, 2014 amin'ny 1:06 PM • navalin'i
tirsit • March 13, 2014 amin'ny 12:26 PM • navalin'i
Izany no fiainako fa Izaho mampifanaraka ny tenako in ny, Andriamanitra anie hitahy Y Trip!!
Clay • March 13, 2014 amin'ny 12:35 PM • navalin'i
Renee • March 13, 2014 amin'ny 9:54 PM • navalin'i
Ara-potoana tsara ny rahalahy. Misaotra anao! hotahian'andriamanitra anie ianao!
Sophie • March 19, 2014 amin'ny 5:14 PM • navalin'i
Amen. Misaotra anao fandefasana ity hafatra ity. Mila izany isika rehetra. Derao Andriamanitra.
E_Jay • March 24, 2014 amin'ny 2:09 aho • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anareo noho izany.. Masìna ianareo mahita antony manosika sy fampaherezana amin'ny fotoana mahory yur… Amen
Nia • March 24, 2014 amin'ny 7:13 PM • navalin'i
tsara Stuff. Great andininy.
Solomona • March 26, 2014 amin'ny 6:55 PM • navalin'i
Misaotra noho ny fahamarinanao ho an'i Jehovah diany. Mieritreritra aho fa tokony hanoratra ny boky faharoa.
LoganLong • Aprily 1, 2014 amin'ny 11:45 aho • navalin'i
Mihevitra aho fa izany no tena manan-danja eo amin'ny kolontsaina amin'izao fotoana izao. Isaky ny inona ianao mahita ny olona any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena nandritra ny ora maro? Trip, Miasa ao amin'ny YMCA, ary hitako ny olona ihany andro sy andro izany, fara fahakeliny adiny iray ny miasa avy, ankapobeny fa mihoatra noho izany. Ary mahazo anao mieritreritra, misy angamba ny Kristianina be izay tonga eo an-Y (Ny lehibe indrindra izahay tao Indiana), Koa ahoana maro amin'izy ireo no mandany 1-2 ora isan'andro fanaovana asa ara-panahy ny tenany tamin'ny? Izany no manan-danja ho ahy, satria izany no antso avy nilaiko mba hiverenana amin'ny endrika ara-batana sy ara-panahy. Misaotra anareo rahalahy.
Marjorie • Aprily 2, 2014 amin'ny 12:20 aho • navalin'i
Amen, Misaotra noho ny fampahatsiahivana!
Oritsegbemi • Aprily 17, 2014 amin'ny 6:39 aho • navalin'i
Izany no teny ara-potoana! TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Josh • Aprily 26, 2014 amin'ny 4:38 aho • navalin'i
Izao no teny-for-a-vanim-potoana. Ao amin'ny kolontsaina misy olana ara-tsosialy maro mba hitady ny tsara sy ny mba ho mendrika ry zalahy sy 'Buff', dia afaka tratry ny ananany izany nakarina Inona no mihevitra fa tokony ho toy ny, Inona ny hafa milaza amintsika isika no mila hitovy.
Milaza fa Andriamanitra dia mihevitra fa efa voafetra workouts sarobidy dia mangirana tamin'ny, oharina amin'ny mandrakizay isika dia afaka mandany amin'Andriamanitra.
Izany dia mampahatsiahy ahy ny tantaran'i Davida, rehefa voahosotra izy mpanjaka Samuel 1 Samuel 16). Andriamanitra milaza ao amin'ny andininy faha- 7, “Ny olona mijery ny miseho eo ivelany, Fa Jehovah kosa mijery ny fo.”
MannyRuiz • Mey 17, 2014 amin'ny 2:05 aho • navalin'i
Tena mampahery Trip! Na inona na inona izay mahazo ahy ho akaiky kokoa an'Andriamanitra aho tena mitondra fahasambarana sy hampahery ahy! Koa misaotra anao ny olona. Tena tiako ianao. Foana aho mivavaka ho anareo :)
Liam • Jona 21, 2014 amin'ny 10:27 aho • navalin'i
Trip aho miasa be ho avy, fa tsy maintsy mampahatsiahy ny tenako mba hamaky ity lahatsoratra ity rehetra indraindray. Manampy hiaro ahy mifantoka amin'ny inona no tena zava-dehibe
Brian • Jolay 4, 2014 amin'ny 9:33 aho • navalin'i
Wow ho toy ny mpiara-bilaogera Tiako ny votoatin'ny ity. Aho workout Buff fa tonga mora kokoa noho ny fahitana ny fotoana indraindray mba haka ny Tenin'Andriamanitra isan'andro. Manontany tena aho avy eo ny antony tsy mitsangana ny fitsapana toy ny tokony. Awesome fampahatsiahivana. Thanks Trip
Gnocchi • Jolay 21, 2014 amin'ny 6:22 PM • navalin'i
Izany no tena mampahery ary efa zavatra Efa an-tsaiko. Tsy mamaky ny Baiboly isan'andro, raha ny tena izy, Afaka aho handeha ho 2 na 3 andro tsy mahazo mifandray amin'ny Tenin'Andriamanitra…fa hitako izao fa mandà ny tenako aho soa mandrakizay. Izany dia midika hoe be dia be ho ahy ny zavatra novakiko androany hanampy ahy manaraka herinandro na volana manaraka. Tsy afaka miantehitra amin'ny izay nataoko tamin'ny taon-dasa, na tamin'ny herinandro lasa…Aho miasa ho an'ny ny mandrakizay!!
Toetra araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra mitana ny teny fikasana ho an'ny fiainana ny ankehitriny sy ny fiainana ho avy!
Thanks Trip Lee, fa an'Andriamanitra ny famelana ny asa amin'ny alalan'ny anao…Imma mamaky ny Teny more! :)
Deborah • Novambra 20, 2014 amin'ny 12:26 PM • navalin'i
Love ity lahatsoratra ity! I tia fanatanjahan-tena & Tia an'Andriamanitra aho, nefa fantatro fa ny ara-panahy no laharam-pahamehana Fitness.
Ngosa • Aprily 14, 2015 amin'ny 6:33 PM • navalin'i
izay awesome hafatra Trip, Efa ela aho no nanontany tena raha tsy mety miasa avy na tsia, na tsy ilaina fotsiny. Ny fanadihadiana mampisava ny rivotra amin izay iray. Thanx, mitandrina BRAGING Bro!!